Xiriirka dowladaha Turkiga iyo Imaaraadka oo soo hagaagaya | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Xiriirka dowladaha Turkiga iyo Imaaraadka oo soo hagaagaya
Xiriirka dowladaha Turkiga iyo Imaaraadka oo soo hagaagaya
Kulan lama filaan ah oo dhex maray Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo sarkaal sare oo dhinaca amniga ah oo ka socda Imaaraadka Carabta oo arrimaha gobolka iyo maalgashiga .
Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, oo ah la taliyaha amniga qaranka ee Imaaraadka, ayaa Erdogan kala hadlay arrimaha gobolka ee khuseeya labada dhinac iyo sare u qaadista maalgashiga, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee WAM ee dawladda Imaaraadka Carabta ka dib kulanka oo ka dhacay Ankara.
Erdogan oo wareysi siinayay telefishinka, ayaa ka dhawaajiyay inuu wadahadal la yeelan doono hogaamiyaha dhabta ah ee Imaaraadka, Amiirka Dhaxalsugaha Abu Dhabi Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.
Sare u qaadista xiriirku waxay leedahay saamayn ballaaran xilli hubaal la’aan weyn ka jirto gobolka.
Dawladaha gobolku waxay qiimeynayaan sida loola macaamilo Afgaanistaan, halkaas oo Taalibaan ay xukunka la wareegtay markii uu Maraykanku ka baxay.
Sidoo kale miisaanka culus ee gobolka uu ku leeyahay dalka Iran ayaa miisaamaya sida loo sii wado wadahadalada si loo soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee ay la gashay quwadaha adduunka.
“UAE waxay calaamad u tahay inay si firfircoon uga shaqeyneyso hagaajinta xiriirka ay la leedahay kooxaha ka soo horjeeda,” ayuu yiri Elham Fakhro, oo ah falanqeeye sare oo ka tirsan hay’adda Crisis Group ee Gacanka.
“Dareenka gobolku wuxuu ahaa mid ka sii daraya taasina inta badan waa sababta oo ah waddamadu waxay ku qanacsan yihiin in Mareykanku uusan had iyo jeer joogin si uu u badbaadiyo xulafadiisa.”
Kulanka heerka sare ah ee naadirka ah ayaa lagu dhisay calaamadaha sii kordhaya ee wacyigelinta sannadkii la soo dhaafay.
Sheekh Maxamed Bin Zayed ayaa waxaa si joogto ah warbaahinta taageera dowladda Turkiga ugu eedeysay inuu gacan ka geystay afgambigii dhicisoobay ee 2016-kii ee ka dhanka ahaa Erdogan iyo inuu taageeray mintidiinta Kurdiyiinta ee Suuriya.
Imaaraatka dhexdiisa, Erdogan wuxuu noqday bartilmaameed ka dib markii Turkigu u raray ciidamadiisa Qadar si ay u taageeraan waddanka yar ee Khaliijka iyada oo dhowaan la soo afjaray qaadistii cunaqabatayntii Imaaraadka iyo Sucuudiga.
Erdogan ayaa u sheegay TVNet goor dambe oo Arbacadii ah, “Wax walba waa ka suurtogal xiriirka u dhexeeya dowladaha,”,
Anwar Gargash, oo ah la -taliyaha diblomaasiyadeed ee madaxweynaha Imaaraadka Carabta, ayaa kulanka ku tilmaamay mid taariikhi ah.
Labadii bilood ee la soo dhaafay, Imaaraadka iyo Turkiga waxay wada galeen heshiisyo ganacsi oo dhowr ah, kadib abaar sannado badan jirtay, in kasta oo ay yar tahay marka la barbar dhigo heshiisyada malaayiinta doolar ah ee caadiyan u ah dhaqaalaha kala duwan ee Abu Dhabi.
Sanduuqa maalgelinta ee Mubadala Investment Co. ee Abu Dhabi ayaa lagu maalgeliyey bilowga iibinta raashinka Turkiga Getir, kaas oo kor u qaaday $ 555 milyan oo maaliyad cusub ah bishii Juun.
Bishii Ogosto, shirkadda mootooyinka ee fadhigeedu yahay UAE ee Fenix ​​ayaa iibsatay Palm-ka Turkiga ee ay isku midka yihiin $ 5 milyan si loogu ballaariyo Turkiga.
UAE waxay ku jirtaa marxaladda “xoojinta xiriirka qof walba, Kala duwanaanshaha dabeecadaha ku wajahan arrimaha qaarkood ma hor istaagi doono isgaarsiinta iyo kor u qaadista fursadaha xasilloonida, barwaaqada iyo horumarka.”ayuu yiri Gargash.
Previous articleUNSOS: REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
Next articleJabhad ka soo horjeeda Daalibaan oo ka aasaasantay Dooxada Panjshir